Dhowr Qof ayaa lagu diilay Gaari Lagu Rasaaseeyay Gobolka Mudug – XOGMAAL.COM
Dhowr Qof ayaa lagu diilay Gaari Lagu Rasaaseeyay Gobolka Mudug
Ma jirto cid rasmi ahaan sheegatay mas’uuliyadda dhibaatada dadkaasi loo geystay waxeyna dhacdadaas ku soo aadayaa xilli duleedka Gaalkacyo uu ka dhacay deegaal u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo xoolo dhaqato ah.
By Soomaaliya	 On Oct 8, 2018
eegaan ka tirsan gobolka Mudug wararka aan ka helayno ayaa sheegaya in weerar lagu dilay dad Shacab ah , ka dib markii maleeshiyaad hubeysan ay gaari rasaaseeyeen kaas oo ku safrayay wadada u dhaxeysa Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Hobyo oo Gobolka Mudug ka wada tirsan.
Dad aaga ka dhawaa ayaa sheegay in Gaari uu u socday degmada Hobyo ee waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyootay 5 ruux oo gaarigaa ku safrayay.
Akhriso: Dowladda Britain oo ka digtay in AMISOM ay Soomaaliya ka baxaan. Sawirro
Daawo:- Ugu dambeyn Mooshinkii laga gudbiyay Madaxweyne Waare oo laga noqday